‘IDIA’ तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर बक्तृत्व कलामा प्रथम हुदाँको अनुभव - Fonij Korea
लेखक: दुध बहादुर लामा | प्रकाशीत मिति: November 1, 2021
प्रवासको जीवन अनि कोरोनाको कहर । निरन्तर कम्पनीको काम वाक्क लाग्दो छ दैनिकी ।
अक्टोबर ७, शनिबार बिहान । झोलामा क्यामरासेट र ल्यापटप छ । पत्रकारितामा बिए पढे पछि रोजगारको सिलसिलामा कोरियामा छु । पत्रकारिता व्यवसायिक रुपमा नगरे पनि एकदमै मनपर्छ । त्यसै मिलेको समयमा यसो केही लेख्ने बोल्ने काम गरि हाल्छु । आज फोनिज संवादको लागि एनआरएनए आइसीसी सदस्य तथा व्यवसायी सोम तामाङ दाजुसंग कुराकानी रेकार्ड गर्ने सल्लाह भएको थियो । भेटघाटको लागि सोम दाइलाई सम्पर्क भो । समय मिल्यो बेलुकीको ।
ह्वासाङमा बस्छन् अमिर योञ्जन । उनलाई फोन गरेँ । उनी आउने भए । समय छ । कता जाने आइडिया आयो सउल गुम्बाको । सन् १९९९ मा कोरियामा कोरियामा आएर अहिले सउल नेपाल गुम्बा संचालन गरिरहनु भएको लामा प्रमुख कुन्साङ दोर्जे फोनमा कुरा भो । उहाँसंगको सम्बन्ध निकट छ । म अहिले सोही गुम्वाको ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको रूपमा पनि काम गरि रहेकै छु । गुम्बा दक्षिण कोरियाको गाङनाममा छ ।
लामाले खान खाने गरि गुम्बामै निम्तो दिनुभो । अमिर र म त्यतै भेट्ने सल्लाह भो ।
कम्पनीबाट गुम्बा दुई घन्टाको यात्रा गर्नु पर्छ । अमिरलाई पनि त्यस्तै हो । हामी गुम्बाको छेउको धेछाङ स्टेशन भेटेर गुम्बा पुग्दा झन्डै १ बजेको हुँदो हो । गुम्बा दर्शन भयो र भोजन पनि । लामो समय पछिको गुरूसँगको भेट भएकोले पनि कुराकानी लामो भयो ।
विभिन्न देशहरूको प्रवासी नागारिकहरूको दक्षिण कोरिया बसाइ अवधिलाइ सरल र सहज बनाउने उद्धेश्य राखि अन्तर्राष्ट्रिय बौध्द धर्म प्रशिक्षक संघ (The International Dharma Instructors’ Association –IDIA) ले नेपाल, थैल्याण्ड, श्रीलंका, भियतनाम, कम्बोडिया र म्यानमार लगायत देशहरुको सहभागितामा “제3회 외국이 근로자 한국어 말하기 대회 2021” अक्टोबरको १७ मा आयोजना गर्दैछ, हामीले सर्वाजिनक रूपमा गुम्वाले निवेदन अह्वान गरेको केही आएन । नेपालले यस अघि २०१७ मा निमा कुमार घिसिङ तामाङ र २०१८ मा लाक्पा डोल्मा शेर्पाले २ पटक प्रथम स्थान हासिल गरिसकेको छ, हामीले फेरि जित्नुपर्छ । तँपाईहरुले सहभागिता जनाउनु पर्यो । लामाले अनुरोध गर्नुभो ।
यस अघि नै प्रतियोगिताको बारे जानकारी थियो । समय नहुने भएकोले सहभागी हुन नसक्ने जनाएको थिएँ । तपाईहरुले सक्नुहुन्छ । दुई महिना समयावधी छ, यहाँ निवेदन फारम छ, भरेर राखिदिनुस् म पेश गरिदिन्छु । लामाले थप्नुभयो । अमिर जि मान्नु भएन ।
मैले एकछिन सोचें, निरन्तर २ पटक नेपालले प्रथम स्थान हासिले गरेको छ यदि मैले जितिन भने । मनमा कुरा खेल्यो । भित्री मनले भन्यो “मैले आफ्नो जन्मभूमि नेपाल, आफ्नो संस्कार सस्कृति कोरियालीसामु चिनाउन पाउछु, यो त मेरो लागि अवसर हो ।”
बेलुकी हुँदै थियो । सोमदाइलाई भेट्न ईन्छन जानु अघि छिटोछिटो विदेशी परिचयपत्र (एलियन कार्ड) को फोटो खिचें, नाम, उमेर, सम्पर्क नं., इमेल र हस्तक्षार गरेको फाराम गुरूलाई छाडेँ ।
इन्छनको नमस्ते एसिया रेष्टुरेण्टमा रातको साढें ९ बजेतिर पुग्यौ । कोरोना र रात छिप्पेकोले नास्ता खाना खाने केही पहुना र सोम दाजु सहितको स्टाफहरू हुनुहुन्थ्यो । दाइ सेफ भएकोले किचेन तिर व्यस्त, संगै भोजन गर्ने दाइको प्रस्ताबले केही समय गेष्ट रूममा कुरेर गफ गर्दै खाना खायौं । दाइ हातको खाना मिठो रहेछ ।
त्यसपछि अमिर जी र म फोनिज संवाद रेकार्डको तयारीमा जुट्यौं, दाजुहरू भोलिको तयारी । सबै सकिए पछि कुराकानी रेकर्ड भो । सन् २००५ मा सेफ भिसामा कोरिया प्रवेश गरि अहिले आफै रेष्टुरेन्ट व्यवसायी हुँदासम्मको अनुभब १ घण्टा जतिको रेकार्ड गर्यौं ।
अन्तराष्ट्रिय बौध्द धर्म प्रशिक्षक संघ-IDIA १९९८ मा स्थापित, जोगे अर्डर अफ कोरियन बुध्दिजम ‘IDIA’ को मिसनरी गतिविधी ब्युरोसंग सम्बद्द संस्था हो । यो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा गरेका र योग्यता परिक्षा पास गरेका सामान्य नियुत्त बौध्द सदस्यहरू मिलेर बनेका छन् । संस्थामा विभिन्न समयमा अबध्द सदस्य प्रशिक्षकमध्येबाट IDIA ले प्रतियोगिताको लागि गत महिना मै सहभागि देशका लागि ८ जना भाषा प्रशिक्षकहरू छनौट गरी नियुक्त गरिसकेका रहेछ ।
एक हप्तापछि मेरो नम्बरमा मेसेज आयो, ‘इ सुन्फुङ, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा प्रशिक्षक । तपाईको फुर्सदमा मलाई फोन सम्पर्क गर्नुहोला ।’ दिउसो खाना खानु फुर्सदको समयमा जवाफ फर्काए ‘बेलुकी काम सकेपछि कुराकानी गर्नेछु ।’ शिक्षकको जवाफ ‘हुन्छ’ भन्ने पाएँ । काम सकाएपछि साँझ कुरा भो । आउने हप्ताको आइतबार गुम्बामा भेटेर तयारी कक्षाका सम्बन्धमा बिस्तृतमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने ।
आइतबार दिउँसो २ बजे भेट भयौं, त्यहाँ म पुग्दा शिक्षक, नेपाली टिमको कोरियन व्यवस्थापक गरि २/३ जना कोरियन र गुरू ज्यु हुनुहुन्थ्यो । सुरूमा बोल्न साह्रै गाह्रो भयो, बोलेको पनि आफैं आधा जतिमात्र बुझें तर गुरू जिले नेपालीमा बुझाउनुभयो । कम्पनीमा कोरियन व्यक्तिसंग कुराकानी गर्नुपर्ने जरूरी थिएन । भाषागत रूपमा टाढा थियो ।
कम्पनीमा आन्याङहासेयो, ने, आल्गेस्सयो र खाम्साहाम्नीदा शब्दहरू पर्याप्त थियो । उक्त भेट नै मेरो तयारी कक्षाको पहिलो कक्षा थियो । मलाई केही स्क्रिप पढ्न लगाउनुभयो । एक हरफ पढेँ । आन्याङहासेयो । ‘छनुन नेफालयेस ओन लामा दुध बहादुर इम्नीदा’ भने । थप अभ्यास गर्छौं, उच्चारण राम्रो रहेछ भनेर प्रसंशा गर्नुभयो । भेटमा आफू प्रतिस्पर्धामा सहभागिता हुदाँ गर्ने तयारी कक्षा, समय र प्रकृयाको बारे तय गरियो । आज सुरूको दिन हो संगै केही खाजा खाउ है भनेर शिक्षकले प्रस्ताब राख्नुभयो । अरूले समयको अभाव देखाएर छट्टियो तर हामीले नजिकैको बर्गर हाउसमा वर्गर र चिसो पियौं ।
कोरियाको चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै ६ हप्ता कक्षा गर्ने कुरा भो ।
त्यसपछि हामीले छुसकको बिदा बाहेक प्रत्येक आइतबार दिउसो ३ देखि ५ बजेसम्म निरन्तर वेइभेक्समार्फत अनलाइन कक्षा गरियो । प्रत्येक दिन कक्षामा मैले पढ्थे र शिक्षकले त्यसमाथि सल्लाह सुझाब दिनुहुन्थ्यो । तयारी गर्दा मलाई एउटै कुराको मनमा आउँथ्यो म मेहनतका साथ प्रथम हुन्छु । दैनिक रूपमा समयानुकुल बनाउदै लेख्दै, बोल्दै धेरै अभ्यास गरियो । कक्षा सुरू गरिदा बोलिने बिषयबस्तु २ पेजमा ७ हरफमा थियो निकै अप्ठ्यारो, गाह्रो र लामो लाग्थ्यो । तर अनुभवी र सरल शिक्षक भएकोले छोट्याउदै उच्च स्तरिय शब्दहरूको प्रयोग गर्दै तयारी अभ्यास धेरै गरियो । यसबीचमा घरपरिवार, साथीभाइ, घुमफिर र पत्रकारिताको कामलाइ केही समयको लागि छेउ लगाएँ ।
छुसक बिदामा जेजुदो जाने योजना थियो, तयारीमा ढिलाइले गर्दा आवातजावात साधारण हवाई टिकट दुइतर्फी पाइएन । साथीले फर्किदा पानीजाहजमा आउने जाने पाए पनि हुन्छ भनेर ११ जनाको टिकट बुकिङ गरेछन् । टाढाको यात्रा भएकोले जान मन नलागेर ५ जनाले टिकट १२ हजार वोनका दरले जरिवना तिरेर क्यान्सिल गरियौं । देगोतमा रहेको नमस्ते रेष्टुरेन्टमा गएर नेपाली डिढो खाएर छुसक छुट्टी मनाएँ ।
अक्टोबरको पहिलो आइतबार चाही तयारी कक्षा प्रत्यक्ष भेटेर गर्ने निर्णय भयो । गाङनमदेखि खुरे स्टेशनको अटुसम् कफिशपमा कफिको स्वादसंगै उक्त दिनको कक्षा भयो । उक्त दिन कार्यक्रममा कुन पोसाकमा सहभागिता हुने के के पर्चा पम्पलेट देखाउने भन्ने कुरा बिशेष रह्यो । मैले म नपालको तामाङ समुदायको आफ्नै मौलिक पोशाक (तामाङ गोइलो (ताकी र कोट) छ भनेर मोबाइलमा तामाङ ड्रेसमा सजिएको फोटो देखाएं । शिक्षक खुशी हुदैं राम्रो रहेछ, यो विशेष पनि हुनेछ भन्नुभयो । त्यसपछि कक्षा सकाएर नजिकैको कोरियन रेष्टुरेण्टमा कोरियन खाना खाएर छुट्टियौं ।
१० तारिक कुन्साङ दोर्जे लामा गुरू सहितको छोटो अनलाइनमार्फत संयुक्त कुराकानी गरि तयारी कक्षा समापन भयो ।
कुरा १७ तारिखको हो, फाइलन दिन भएकोले साँढे ११ मा आइपुग्नु पर्छ भन्ने तालिका थियो । जित्छु भन्ने विश्वास बोकेर तामाङ गोइलो हाते झोलामा बोकेर बिहान सबा आठमा जोगेसा गुम्बाका लागि कम्पनीबाट हिडेँ ।
बस स्टेशनमा १५ मिनेट जति कुरें तर म जाने ठाउँको बसको समयतालिका नै छैन । मन अत्तिरहेको थियो । ३ स्टेशन टाढा ट्याक्सी पार्किङ थियो त्यसैले त्यहाँसम्मको बस चढेर ट्याक्सी चढियो । ड्राइभरले मिटरमा लगेन । मसंग नगद छैन, एटिएम कार्डले हुन्छ नि ? तर उसले उता निकाल्न मिल्छ नभए मेरो बैङ्क खातामा पठाए हुन्छ भन्यो । भाडा १० हजार वन हो । नेपाली समुदायमा केहीले ८, १०, १२ अंकलाइ अशुभ मानिन्छ त्यसैले मैले ९ हजार पठाइ दिन्छु भनेको मानेन, मैले १० हजार १ वोन पठाएँ । बरू उसले ५ सयको सिक्का दियो । खुरे स्टेशनबाट खिम्पो विमानस्थल स्टेशनसम्ममा ट्रेनमा छिट्टे आइपुगेकोले सिधैं दोङदेमुनमा नेपाली खाना खान जान मन लाग्यो ।
कार्यक्रममा लामा गुरू दिउसो २ बजे आइपुग्ने कुरा थियो । अमिरलाइ फोन गरेको फारन मै पो । खाना खाने साथी खोजिरहेको संगै खाने सोचिरहेको मैले कोरियन भाषा प्रशिक्षक तथा मेरो शिक्षक इसुनफुङ लाइ फोन गरे । म त छिट्टै आइपुगे, तपाइको फुर्सद भए दोङदेमुन आउनुहोस् नेपाली रेष्टुरेण्टमा नेपाली परिकार खाऔं । शिक्षकले कार्यक्रमको तयारी गर्नुपर्छ समय छैन भन्ने आशय राख्नु भयो । एक्लै हिडियो दोङदेमुनको रेलमा ।
सउल के पुगेको अमिरको फोन आयो । हामी दुबै एकै समयमा सउल पुगेछौं भेटेर दोङदेमुनको ट्रेन चढियौं । केही बेरमा शिक्षकको फोन आयो दोङदेमुनको बाटो आउछु संगै जाऔला । शिक्षकले पनि नेपाली परिकार खानु भयो ।
खाना खाएर १२ बजे तिर कार्यक्रम हुने ठाउँ जोगेसा पुग्यो । हलमा स्वागत र नाम दर्ताको काम भैरहेको रहेछ । कोरोनाले गर्दा सिट सिमित भएको नेपालको तर्फबाट क्यामराम्यानको रूपमा अमिर, म सहभागी प्रतिस्पर्धीको ब्याच लगाइ हलमा प्रवेश गरे । त्यहा साढेँ १२ रिहर्सल भएकोले मैले तुरून्तै तामाङ गोइलो लगाएर तयार भएँ ।
सौभाग्यले प्रस्तुती मेरो ८ नं. मा भएपनि ४ नं. का थैल्याण्डका प्रतिस्पर्धीको अनुपस्थितिमा मैले सातौंमा आफ्नो प्रस्तुति दिन पाउने सूचना पाएर । विभिन्न ६ देशका ९ प्रतिस्पर्धी रहेको प्रतियोगितामा रिहर्सलमा अरू देशको धेरै जसो बोल्दा डराएको के बोल्ने, कसरी बोल्ने हिच्किच्याएको देख्दा मैले धेरै राम्रो प्रस्तुती दिन सक्छु भन्ने मनमा हौसला बढ्यो भने १/२ जनाको राम्रो भएकोले मनमा डर जस्तो पनि थियो ।
कार्यक्रम २ बजे सुरू हुनेभएकोले समय बाँकी थियो, कार्यक्रम स्थल गुम्बा भएकोले बाहिर गुम्न अनुमति पायौं, तस्वीर खिच्दैं र घुम्यौं ।
कार्यक्रम हलमा २ बज्नै लाग्दा सबै बसे । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि, बिशेष अतिथि, जजहरू, प्रतिस्पर्धीहरू र उपस्थित सबैलाइ आसनग्रहण गरेर कार्यक्रमको सुरूवात भयो । कार्यक्रममा कोरियाको राष्ट्रिय गान र मौन धारण गरियो । क्ष्म्क्ष्ब् का अध्यक्ष ली जे होङले यो कार्यक्रमले कोरियामा रहेका प्रवासी मजदुरको सहज र सरल जिवनशैली बिताउन सहयोग मिलोस् भन्दै प्रतिस्पर्धी सबैलाइ शुभकामना दिएका थिए ।
प्रतियोगितामा विभिन्न देशबाट नेपाल, थैल्याण्ड, श्रीलंका, कम्बोडियाका १/१ जना भियतनामका २, र म्यानमार ३ जना प्रतिस्पर्धीहरूले हरेकले प्रतिस्पर्धीले नियमानुसार आ–आफ्नो शीर्षकमा प्रस्तुति ५ मिनेटभित्र राखेका थिए ।
कार्यक्रममा म्यानमारका मिन्थेरिनले आफूलाई कोरियन खाना धेरै मन परेकोले स्वदेशमा गएर कोरियन रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताएको बताए । कोरियामा गरेको संघर्ष, कोरियाको संस्कार, संस्कृति, जिवनशैली, ऋृतुहरू र इतिहासको बिषयमा आफ्नो प्रस्तुति राखेको थिए ।
मैले कोरिया इतिहासको आकर्षण बिषयमा प्रस्तुती राखेको थिएँ । ‘एक पटक ३५ बर्ष सम्म जापानी शासनको अधीनमा रहेको बेला कोरियाली नागारिकले निकै दुख कष्ट भोगेको भए पनि स्वतन्त्रताको लागि जनताको अथक प्रयासले अगस्त १५ मा मुक्ति छोटो (स्वतन्त्रता) मिल्यो । कोरिया युद्धले विनाश भयो । आज विकसित कोरिया हेर्दा म साँच्चै कोरियाली जनताको मेहनत अद्भुत कार्यकुशलता देखेर गर्व लाग्छ । कोरियालीहरु स्मार्ट, उत्कृष्ट कौशल र धेरै मेहनती छन् । जोसेन राजवंशको समयमा विकसित विज्ञान र प्रविधीको अविष्कारले साँच्चै राजा सेजोंग महान व्यक्ति थिए भन्ने थाहा हुन्छ । Jikji Simgyeong संसारको सबैभन्दा पुरानो धातु टाइपफेस हो । नेपाल बुद्धको जन्मभूमि भएकोले पनि इतिहास आकर्षक छ । तर मलाई यो महान कोरियाली इतिहासले तान्यो ।’ जस्तो विविध विषयलाई समेटी प्रस्तुति राखेको दिएँ ।
सबैको प्रस्तुति सकियो । ३० मिनेटको लामो बौद्ध दर्शन सम्बन्धी कोरियाली गुम्बाको डकुमेन्ट्री भिडियो देखाएपछि कार्यक्रम नतिजा आयो । मनमा उत्सुकता बढ्यो । कोरियाली बौद्ध इतिहास र संस्कृति मेमोरियल हलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जोगेसामा आयोजित ६ देशका ९ जना फाइनल नतिजामा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने म प्रथम घोषित भएँ । प्रमाणपत्र र प्ररस्कार लिइ मनमा खुशी हुदैं सबैलाइ धन्यवाद दिए । अन्तमा सामुहिक तस्बीर लिदैं कार्यक्रमको समापन भयो । फेसबुकमार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व स्वरुप सउल नेपाल गुम्बा र नेपालको तेमालमा निर्माणाधीन ‘उग्येन पेज्यूङ डुब्देलिङ गुम्बा’लाई म १ लाख ११ हजार १११ वोनका दरले सहयोग गरेँ ।